एआईले कसरी गर्छ ‘भर्चुअल’ सुरक्षा?
श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले दिए राजीनामा
श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
पोखरामा एमालेलाई विरासत जोगाउन‚ गठबन्धनलाई भत्काउन चुनौती सत्ता गठबन्धनलाई वडामा तालमेल नभएकाले भोट काटिन सक्ने डर छ। एमालेका लागि पार्टी विभाजनको असर मुख्य चुनौती बनेको छ।
अनि १४ वर्षपछि अभिनयमा फर्किए विमल यसअघि पनि आफ्ना सङ्कल्प तोडिसकेका विमलले यस पटक अभिनयमा नफर्किने भनी १४ वर्षअघि गरेका सङ्कल्प तोडेका छन्। उनी पल्पसा क्याफेबाट नाटकको अभिनयमा फर्किएका छन्।
धनगढीमा गठबन्धन र एमालेलाई स्वतन्त्रको चुनौती सुदूरपश्चिमको प्रमुख शहर धनगढी उपमहानगरको मेयरमा सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनौती बनेका छन्।
चुनावमा कांग्रेसले माओवादीबाट धोका पाउन सक्छ, ओली विरोधी भाष्य बलियो भएन कांग्रेस र माओवादीले जुन भाष्य टिपेर चुनाव लडिरहेका छन् अहिले, त्यो पूरा गलत छ। यदि भोलि गएर कसैलाई फाइदा हुन्छ भने एमालेलाई हुन्छ।
धरान: यस पटक ‘लेफ्ट’ कि ‘राइट’?
स्थानीय चुनाव गोपाल दाहाल
लाहुरेको शहर धरानमा यस पटकको निर्वाचनमा पनि ‘लेफ्ट’ र ‘राइट’ पक्षका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
हेटौंडाको मेयरमा पुराना सहकर्मीको प्रतिस्पर्धा
बागमतीको सदरमुकाम हेटौंडा उपमहानगरको मेयरमा १८ उम्मेदवार भए पनि दुई जना पुराना सहकर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
कृषिमा विदेशी लगानीः अवसर कि जोखिम? कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने वा नदिने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। केही यसको पक्षमा छन् भने केही विपक्षमा छन्। सरकारले भने सशर्त लगानी गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ।
भरतपुरको मेयरमा कांग्रेस मत निर्णायक गत निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा मेयरको उम्मेदवारै नभएको रूख चिह्नमा सात हजार मत परेको थियो। त्यही मत कता जान्छ भन्ने कुराले यस पटकको परिणाम प्रभावित हुने देखिन्छ।
जसको चुनावी प्रचारमा गाउँले नै पैसा जुटाइरहेछन् मतदाताले खुट्टा ढोगेको तस्वीरले चर्चामा आएकी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षकी उम्मेदवार मीना विश्वकर्माको चुनावी प्रचारका लागि गाउँले नै आर्थिक सहयोग जुटाइरहेका छन्।
म्यादी प्रहरीको सीपलाई कसरी सदुपयोग गर्ने?
प्रदेशका सञ्चार माध्यम सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक सातै प्रदेशका सञ्चार माध्यम सम्बन्धी पुस्तक ‘प्रदेशमा मिडिया’ सार्वजनिक भएको छ।